देहदार काठका टापुहरू पत्ता लगाउनुहोस्, तपाईंको भान्साकोठामा चरित्र | सजाउनुहोस्
देहाती, काठको भान्सा टापुहरू
सुसी फोंटेला | | किचेन्स, सजावट, फर्नीचर
टापुहरू तिनीहरू खुला किचनको सार हुन्। तिनीहरूले भौतिक बाधाको रूपमा, भान्छाकोठा र बैठक कोठाको वातावरण अलग गरेर ठाउँको सामान्य डिजाइनमा योगदान गर्दछ। थप रूपमा, ती दुबै काम र भण्डारणको लागि अतिरिक्त ठाउँ प्रदान गर्दछन् र सुसज्जित छन् भने, ब्रेकफास्ट टेबलको रूपमा सेवा गर्न सक्दछन्।
टापुहरू खुला किचनहरूमा केन्द्रित भए। उसले आफ्नो छनौटको दुबै हेरविचार गर्दछ सौंदर्यको साथ साथै व्यावहारिक चरित्र। काठका टापुहरू रस्टिक शैलीका रसोईहरू सजावटको लागि उत्तम प्रस्ताव बने। Decoora मा हामी तपाइँलाई छविहरूका साथ देखाउँदछौं।
1 किन काठको टापु छनौट गर्नुहोस्
2 देहाती सेटिंग्समा काठको टापु
3 भण्डारणको साथ काठ द्वीपहरू
4 स्टूलको साथ काठको टापु
5 देहात शैली पनि सेतोमा
6 तपाईको भान्साको टापुमा हल्का काठ प्रयोग गर्नुहोस्
7 देहात देश घर शैली
8 एउटा सानो देहात टापु
9 देहाती र औद्योगिक फेसनमा छन्
10 गाढा टोनमा देहाती काठको टापु
11 देहदार टचहरूको साथ एक आधुनिक र नॉर्डिक किचन
किन काठको टापु छनौट गर्नुहोस्
una काठ टापु यो सधैं विचार गर्न प्रस्ताव हो जब सजावट वा देहात शैली भान्सा redecorating। र जब हामी काठको टापुको बारेमा कुरा गर्छौं, हाम्रो अर्थ सबै प्रकारका प्रस्तावहरू हुन्, दुवै दुवै काठमा र धातुको खुट्टा वा संगमरमरको काउन्टरटप्सको साथ। विचारहरू बहुविध छन् र वास्तवमै शैलीका विभिन्न प्रकारहरूमा देहदार सारको साथ एक भान्छा बनाउने भान हुन्छ।
La काठ एक यस्तो सामग्री हो जुन हामी बारम्बार छनौट गर्दछौं र हाम्रो घर सजाउनका लागि, यो महान, प्राकृतिक छ र ठूलो गर्मी प्रदान गर्दछ पछि। काठको फर्नीचर अन्तिम क्लासिक फर्नीचर हो, धेरै वर्षको लागि प्रयोगको लागि राम्रो। उस्तै काठको किचन टापुहरूमा जान्छ, तिनीहरू क्लासिक, रमणीय, बलियो र उनीहरूमा घण्टा र घण्टा कामको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ, घरको लागि उपयुक्त जहाँ भान्सा महत्वपूर्ण स्थान हो।
देहाती सेटिंग्समा काठको टापु
काठको टापुले भान्सामा ल्याउन सक्ने देहदार चरित्र ठूलो छ। तपाईं फर्नीचर को डिजाइन मा आराम गर्न सक्नुहुन्छ, कालो वा सेतो मोडेलहरू छनौट गर्दै केहि मोल्डिंगले तिनीहरूलाई व्यक्तित्व दिन्छ। उनीहरूले प्रदान गरेको ठाउँमा निर्भर गर्दछ, एउटा टापु डिजाइन वा अर्को विचार गर्नुहोस्। भान्साकोठाका लागि त्यहाँ धेरै काठका टापुहरू छन्, तर यदि तपाईं वास्तवमै देहाती डिजाइन चाहानुहुन्छ भने तपाईं ती विन्टेज जs्गलहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन अन्य चीजहरूबाट बनेको देखिन्छ, जुन उनीहरूमाथि वर्षौंको काम लिन्छ, गाढा टोनहरूमा। यस अर्थमा उच्च पालिश काठ यति देहात छैन।
भण्डारणको साथ काठ द्वीपहरू
यदि जम्मा गर्ने ठाउँ भान्छामा यो अभाव छ, क्याबिनेट वा दराजको साथ एउटा टापुमा शर्त बनाउनुहोस् किचन भाँडा, फलफूल वा तरकारीहरू भण्डार गर्न। यदि यो आवश्यक छैन भने, तपाईं साधारण तल्लो शेल्फको साथ सरल र सस्ता डिजाइनहरूसँग खेल्न सक्नुहुनेछ। आजकल धेरै घरहरूमा भण्डारण प्राय: आवश्यक हुन्छ, किनकि तपाईंले प्रत्येक अन्तिम कुनामा लाभ उठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ धेरै टापुहरू छन् जसमा लुकेका ड्रअरहरू वा शेल्फहरू छन् जसमा सामानहरू भण्डार गरिएको छ।
स्टूलको साथ काठको टापु
केहि ब्रेकफास्ट मल तपाईंको टापुको डिजाइन पूरा गर्न सक्दछ। यदि यी पनि काठबाट बनेका छन् भने, ती ठाउँ ओभरलोड गर्ने छन् यदि तपाईंको भान्छाकोठा सानो छ भने; त्यस्तो अवस्थामा, तिनीहरूलाई धातुमा छान्नुहोस्, हल्का आकारहरूको साथ। आज तपाईं बजारमा समर्थन बिना वा समर्थन बिना फरक प्रस्तावहरू पाउनुहुनेछ। मिल्दो मल सधैं एक महत्त्वपूर्ण विवरण हो जब हाम्रो टापु राम्रोसँग संयोजन गर्दछ। उनीहरूले यसलाई शैली र कार्यक्षमता दिन्छन्, किनकि यस तरीकाले हामी यसलाई खाने स्थानको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछौं वा भान्साकोठामा काम गर्दा मानिसहरू आएर कुरा गर्न सक्दछन्।
देहात शैली पनि सेतोमा
El सेतो रंग धेरै फैशनेबल छ र त्यसैले हामी यसलाई धेरै वातावरणमा देख्न सक्छौं फरक यो एक टोन हो जसले प्रकाश ल्याउँछ र ठूला ठाउँहरू सिर्जना गर्दछ। भान्साकोठामा यसले सबै चीजहरू सफा पक्ष दिन्छ जुन हामी धेरै मन पराउँछौं। त्यसकारण तपाईं आफ्नो काठको टापुलाई सुन्दर सेतो रंगमा रंगाउने निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ जुन प्रकाश प्रदान गर्दछ। देहदार रसोईहरू अब खैरो टोनमा काठको साथ अन्धकार हुनुपर्दैन, तर तिनीहरू पनि सेता हुनसक्छन्, एउटा स्वर जसले तिनीहरूलाई अपडेट गर्दछ।
तपाईको भान्साको टापुमा हल्का काठ प्रयोग गर्नुहोस्
यद्यपि सबै भन्दा आवश्यक देहाती शैलीले प्राय: गाढा टोनमा काठ प्रयोग गर्दछ, सत्य त्यो हो यी प्रकारका टापुहरू हल्का काठमा पनि देख्न सकिन्छ। आजको घरमा हल्का टोनमा काठ आवश्यक भएको छ। यसले न्यानोपन प्रदान गर्दछ किनकि यो काठ हो तर एकै साथ यसले प्रकाश घटाउँदैन, जुन चीजले काठले धेरै अँध्यारो स्वरमा गर्न सक्छ। यसैले खाली ठाउँहरू धेरै खुला देखिन्छन्। तपाईं हल्का काठमा एउटा टापु छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन यसको देहातपूर्ण स्पर्श प्रदान गर्दछ तर अधिक हालको छ।
देहात देश घर शैली
को देशका घरहरूमा जहिले पनि केही देहदार हुन्छ, तर तिनीहरूसँग निश्चित थप ठाडो स्पर्श छ। उदाहरणका लागि यस भान्साकोठामा सुन्दर खैरो काठको फ्लोर र क्याबिनेटहरूसँग हल्का रंगहरू प्रयोग गरिएको छ जुन टापुलाई कच्चा टोनमा मिलाउन मद्दत गर्दछ जुन प्रकाश प्रदान गर्दछ तर धेरै क्लासिक र कालोहित हो। यो गाढा रंगको शीर्षको साथ एक राम्रो टापु हो यसलाई बाहिर खडा बनाउन र धातुको टोनमा ह्यान्डल गर्दछ। यो विशाल छ र क्याबिनेट र शेल्फमा भण्डारणको साथ। एक देहाती रसोईघर एक लामो समय को लागी डिजाइन।
एउटा सानो देहात टापु
सबै टापु भान्सा धेरै प्रशस्त हुनु हुँदैन। केही वर्ग किचन पनि हुन् काठमा सानो वर्ग टापु राख्न अनुमति दिन सक्छ। उदाहरण को लागी, यो एकदमै सुन्दर छ, देसी र कालो काठमा कि सेतो भान्छामा खडा छ। ह्यान्डलहरू धातुले बनेको हुन्छ, कालो मा धेरै नै चिह्नित औद्योगिक टोनमा। योसँग व्यक्तित्व धेरै छ र भान्सामा अधिक कार्यक्षमता दिन्छ। यदि हामीले पाels्ग्रा थपेमा यो अझ बढी व्यावहारिक छ किनकि सानो भएकोले यसलाई सजीलै सार्न सकिन्छ।
देहाती र औद्योगिक फेसनमा छन्
रस्टिक र औद्योगिक मिश्रण धेरै अवसरहरूमा किनभने उनीहरूसँग समान शैलीहरू छन्। तिनीहरू कडा काठको प्रयोग गर्छन् जसको प्रयोग भएको देखाईएको छ, किनकि यो काठ उद्योगहरूमा प्रयोग गरिएको थियो त्यसैले हामी टापुहरू देख्न सक्छौं जुन दुबै शैलीहरू प्रयोग गर्दछ। धातुको टचहरू थप्नुहोस् र तपाईंसँग रस्टिक, विन्टेज र औद्योगिक सम्झनाहरू सहितको भान्छा हुनेछ।
गाढा टोनमा देहाती काठको टापु
यो भान्छाको लागि काठको टापुले हामीलाई अर्कै रंगले आश्चर्यचकित गर्दछ। भान्साले भुइँहरू र भित्ताहरूमा हल्का रंगहरू प्रयोग गर्दछ, किनभने काठ वास्तवमै सुन्दर गाढा निलोमा रंगिएको छ जुन काठको वर्कटपको शीर्षसँग पूर्णरूपमा मिल्दछ। विशाल किचनका लागि जोखिमपूर्ण विचार तर एउटा अत्यन्तै सुन्दर र विशेष हो।
रंगको किचन टापुहरू, के तपाईं हिम्मत गर्नुहुन्छ?
देहदार टचहरूको साथ एक आधुनिक र नॉर्डिक किचन
यदि तपाईं बोहेमियन वायुमंडल मनपराउँनुहुन्छ भने, यस प्रेरणालाई नबिर्सनुहोस्। काठ द्वीपहरू जहिले पनि एक प्रवृत्ति हुन जान्छन् किनकि हाम्रो भान्सामा तिनीहरूलाई समावेश गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। जे होस् काठको देहात आकर्षण छ, हामी थोरै विवरणको साथ सबै चीज घुमाउन सक्छौं। यो टापु एकदम व्यावहारिक छ र हामीलाई त्यो धातुको कार्ट र सुन्दर प्रकाशको काठले आश्चर्यचकित गर्दछ जुन सबै चीजलाई एक धेरै प्राकृतिक स्पर्श दिन्छ।
तपाईले यी भान्छाहरूको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? के त्यहाँ एक छ जुन तपाईंलाई विशेष मनपर्‍यो?
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » स्पेसहरू » किचेन्स » देहाती, काठको भान्सा टापुहरू
सिरेमिकको साथ घरको भित्री भाग कसरी सजाउने
सरल र सस्तो प्वाल प्लगहरू